Ukulinganiswa koMbane wokuHlahla kunye noTshintsho lwe-Enthalpy
I-calorimeter isixhobo esisetyenziselwa ukulinganisa ubuninzi bokufudumeza kokushisa kwi-chemical reaction. Iimbali ezimbini zezona calorimeters eziqhelekileyo ziyikhomitha yekhofi yekhofi kunye ne-calomimeter yebhomu.
IKhoorimeter yeKhofi yeKhofi
I-calorimeter yekhofi yekhofi iyinkobe ye-polystyrene (iSyrofoam) enekhava. Inkompo izaliswe ngokukodwa kwimiqulu yamanzi eyaziwayo kunye ne-thermometer ifakwe kwisigqubuthelo sendebe ukwenzela ukuba i-bulb yayo ingaphantsi kwamanzi.
Xa i-chemical response reaction ivela kwikomori yekhofi yecafometer, ukushisa kwempendulo xa ixutywa ngamanzi. Utshintsho lokushisa kwamanzi lisetyenziselwa ukubala inani lokushisa eliye lafakwa (elisetyenziselwa ukwenza iimveliso, ngoko ke ukushisa kwamanzi kuhla) okanye kuguquke (kulahlekelwa emanzini, ngoko ukushisa kwalo kwanda) ekuphenduleni.
Ukuhamba komlilo kubalwa ngokusebenzisa ulwalamano:
q = (ubushushu obuthile) xmx Δt
apho ukufudumala kwentsholongwane, m ubunzima kwigram , kwaye Δt yitshintsho lokushisa. Ubushushu obuthile bubungakanani obushushu obufunekayo ukuphakamisa ubushushu be-1 gram ye-substance degree 1 degree Celsius. Ubushushu obuthile bamanzi ngu-4.18 J / (g · ° C).
Ngokomzekelo, khawucinge ngempendulo yamachiza eyenzeka kuma-200 amagremu wamanzi kunye nokushisa okuqala kwe-25.0 ° C. Impendulo ivumelekile ukuba iqhube kwikhamorom cup yekhofi. Ngenxa yempendulo, ukushisa kwamanzi kuya kutshintsha ku-31.0 ° C.
Ukuhamba kobushushu kubalwa:
q amanzi = 4.18 J / (g · ° C) x 200 gx (31.0 ° C - 25.0 ° C)
q amanzi = +5.0 x 10 3 J
Ngamanye amazwi, iimveliso zempendulo zavela kwi-5000 J yokushisa, elalilahlekelwe emanzini. Inguqu ye- enthalpy , ΔH, ngokuba impendulo iyalingana nobukhulu kodwa inxamnye nesibonakaliso sokuhamba komlilo kumanzi:
ΔH ukuphendula = - (q amanzi )
Khumbula ukuba ukuphendula ngokukrakra, ΔH <0; Umanzi ulungile. Amanzi achukumisa ukushisa ekuphenduleni kunye nokwanda kweqondo lokushisa kubonakala. Ukuphendula okuphelileyo, ΔH> 0; Umanzi awunayo. Amanzi anikezela ukushisa ukuphendula kunye nokuhla kweqondo lokushisa kubonakala.
I-calorimeter yekhofi yekhofi inkulu ukulinganisa ukufudumala kweshushu kwisisombululo, kodwa ayikwazi ukusetyenziswa kwiimpendulo ezibandakanya iigesi kuba ziza kusinda kwindebe. I-calorimeter yekhofi yekhofi ayikwazi ukusetyenziswa kwiimpembelelo eziphezulu zokushisa, mhlawumbi, ekubeni ezi ziza kutyhafaza indebe. I-calorimeter yebhobho isetyenziselwa ukulinganisa ukuhamba kweentsholongwane zegesi kunye nokuphendula okuphezulu kweqondo lokushisa.
I-calorimeter yebhomu isebenza ngendlela efanayo nekharimeter yekhofi yekhofi, kunye nomlinganiselo omkhulu omkhulu. Kwi calorimeter yekhofi yekhofi, impendulo iyenzeka emanzini. Kwi-ibhola ye-calorimeter, impendulo iyenzeka kwi-container yensimbi etyikityiweyo, ebeka emanzini kwisitya esinqabileyo. Ukuphuma kwefuthe ukusuka ekuphenduleni kuya kudlula iindonga zesitya esitywinwe kumanzi. Uhlu lobushushu lwamanzi lulinganiswa, njengoko kwakunjalo ngekhamorom cup yekhofi. Uhlalutyo lokuhamba kweentsholongwane luyinkimbinkimbi ngakumbi kunokuba i-calorimeter yekhofi yekhofi kuba ukufudumala kweengcingo kwii-calorimeter kufuneka kuthathelwe ingqalelo:
Ukuphendula = - ((q amanzi + b ibhomu )
apho amanzi = 4.18 J / (g · ° C) xm amanzi x Δt
Ibhokhwe inomlinganiselo osisigxina kunye nobushushu obuthile. Ubunzima bhobho banda ngokushisa okuthethiweyo maxa wambi kuthiwa yi-calorimeter rhoqo, echazwe ngophawu C ngamacandelo e-joules kwi-degree ye-Celsius. Ixesha le-calorimeter lizimisele ngokulinganisa kwaye liyahluka ukusuka kwikhalorimeter enye ukuya kwelinye. Ukuqhuma kobushushu bhobho kukuba:
b ibhomu = C x Δt
Emva kokuba i-calorimeter isaziwa rhoqo, ukubala ukuhamba kwemvula yinto elula. Uxinzelelo phakathi kwebhomu ye-calorimeter isoloko iguquka ngexesha lokuphendula, ngoko ukufudumala kokushisa akungalingani ngobukhulu kwinguqu ye-enthalpy.
Iikhampasi zaseRiphablikhi zaseRepublican Smear ekhulwini lama-21
Luhlobo luni lweeMpawu zokuPhupha iMarquation Mark?
Modal yangaphakathi (izenzi)
Iingcaphulo malunga noThixo ukusuka eSri Ramakrishna